Singapore na ihe nzuzo dị n'azụ chewing gum nke 500 dollar - 1aviagem.com
Gara aga post: Malaysia - Petronas Towers
Nkwupụta ozo: Ndụmọdụ ndị dị na Gramado - Brazil
Edebere 13 December 2018 site Römulo Lucena
Oghere zuru ụwa ọnụ
Ọfọn ọ bụrụ na ị gbasoro blog a, ị maralarị esi esi na Marina Bay Sands, Cheta na post bụ ebe a: https://1aviagem.com/singapura-sobre-exposicoes-e-o-marina-bay-sands/
Ma n'ezie, a ka nwere ọtụtụ ihe na-efu na mba a.
Ya mere, post a na-akwado nke gara aga, na-achọkwu ihe ọmụma, ndụmọdụ na ebe ị ga-eleta.
Ihe mbu i kwesighi, ma obu na i nwere ike ime na Singapore bu ... chewing gum!
Nke a ka m weere n'okporo ụzọ ụgbọ oloko, nwere ihe ịrịba ama na-adọ aka ná ntị na ị nweghị ike ịme chịngọm. M wee na-eche, ma gịnị mere nke a? M wee zaa azịza ya. Achọtara m ihe ndị a:
Gọọmenti mere nnyocha ma chọpụta na ọnụahịa nke idebe mmiri mmiri ozuzo, akụ ọha na eze, ụzọ ụzọ ụgbọ mmiri, wdg, dị elu nke ukwuu n'ihi na-egbu egbu na-aragide na ha.
N'ihi ya, ha kpebiri iwuchi ya na mba ahụ. Ihe ọma bụ SGD 500,00 (Singapore Dollars).
Ọ bụ ya mere e ji machibido chewing gum na Singapore. Ma, e nwere ụfọdụ ndị dị ka nicotine gum ma ọ bụ maka ọgwụgwọ. A na-ahapụ ndị a.
Ịchọtara ya nke ukwuu iji kwụọ 500,00 maka igwe ejiji?
Ya mere, gee m ntị nzaghachi m n'ụgbọrụ.
Ọ na-agụ na Singapore bụ otu n'ime ndị 10 kasị eme ihe n'eziokwu ná mba ụwa dị ka IPC: (ọ ga-abụ ihe kasị eme ihe n'eziokwu 6º) Data na-na saịtị a na ebe a: https://www.ipc.transparenciainternacional.org.br/
N'ihi ya, ekpebiri m ịjụ onye na-anya ụgbọ ala ahụ ihe ọ pụtara na ọ bụ nrụrụ aka.
Enye ama ada ukp o ¯ n emi ony u ¯ n od oh o ete:
"Nrụrụ Aka? Na mba m? Ee e! Ọ buru na onye ọ bula emeru aru, agēme ka ọ nwua.
Idem ama akpa mi idem. Site n'ụzọ, n'otu ọkwa ahụ, Brazil nọ n'ọnọdụ 96 nke ngụkọta nke 180. (Data 2017).
Mgbe m na-ekwu okwu banyere ihe ọmụma, m nwere ọchịchọ ịgbago na Toyota Prius. Ọfọn, ọ bụ otu n'ime ụgbọala ole na ole na Brazil (nke a pụtara na gas na ọkụ eletrik). Achọrọ m inwe otu, n'ihi na ọ ga-azọpụta ọtụtụ mmanụ, ma ọ dị mwute na ọ dị oke ọnụ maka onye Brazil. taxi, ma ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụgbọ ala mara mma.
Gaa ọ dịkarịa ala abalị abụọ na Marina Bay Sands - MBS.
Ọ bụrụ na ị gafere naanị otu ị ga-enwe ike ịchọpụta ihe niile. Ihe mere ị ga-eji nọrọ ebe ahụ:
1- Echegbula gbasara ụdị nkwụnye plọg ahụ nke chaja, ebe ahụ bụ oghere maka ikpu. Ọbụna ọdụ ụgbọ USB abụọ dị n'akụkụ ntọala, ọ bụghị nrọ nke onye ọ bụla njem? (I.e.
2- Chekwa na nri ụtụtụ.
Amaara m na ụlọ oriri na ọṅụṅụ nke Marina Bay ga-agwa ndị ọrụ ga-abụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ mara mma nke dị na 57 n'ala. Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịchekwa ego na-aga ala B2 ma mee ụtụtụ ụtụtụ. A na-ere nri nku nri nke ọma. The price ranges si 50,00 (na 57 n'ala restaurant ka 10, 00 dollar B2 n'ala. Ma ọ bụrụ na ị chọrọ ị nwere ike ịjụ ime ka nri ehihie ma na-na gị ulo na a mara mma na-ele si n'ebe ahụ. (Nke fọrọ nke nta hà onye na ụlọ oriri na ọṅụṅụ).
3- ọdọ mmiri kachasị mma n'ụwa.
Ọ bụ n'elu MBS, n'akụkụ nke ọzọ, na-abụghị ụlọ oriri na ọṅụṅụ. Nke a agaghị efu, site na anya na mmetụta nke ịnọ na mmiri karịa 200 mita elu. Na mgbakwunye na ume ọhụrụ dị mma ma mara mma gburugburu ebe obibi ahụ. Extra n'ọnụ, na-ehihie, mmiri bụ ọkụ, i nwere ike ịnọ ruo mgbe anyanwụ dara hụrụ si dị elu bụ ihe dazzling. Ọzọkwa anyanwụ bụghị otú ike na ị pụrụ ọbụna anọ a ezumike oche nke dị n'ime ọdọ mmiri. Ime nke a dị nnọọ jụụ, na-enye obi ụtọ ...
Ma iji nweta ihe ijuanya a, ị ga-anọ n'ụlọ nkwari akụ ahụ. Ị ga-enweta ya na kaadị ndị ọbịa.
Ebe ị ga-aga:
Ọbụna ma ọ bụrụ na ịnọghị na MBS m nwere ike ịga leta ya ụlọ ahịa nke dị na okpuru ala nke agbụ họtel.
Ihe kpatara ya, ihe niile ka a ga-eme ka ọ dị mma, ọbụnakwa nwere usoro dị jụụ nke na-emepe akụkụ nke ụlọ na mmiri na-abanye n'ime, dịka a ga - asị na ọ bụ ọbụna idei mmiri. Mmiri dị ukwuu nke na mgbe usoro a gasịrị, ụgbọ mmiri si n'ime ụlọ ahịa pụta ma mee ka nlọghachi gburugburu ebe obibi ya. Ịnwere ike ịnwe ọrụ a.
Ebe ọzọ ị ga-eleta bụ cassino (nakwa na ntụgharị MBS). Achọpụtara m na ọ na-adọrọ mmasị n'ihi na ha na-etinye ego na ego ha, ha wee mara ihe ize ndụ dị, ma ka nwere obi ike iji tinye ya n'ihe ize ndụ.
Mba na-adọba ụgbọala ọ ga-ekwe omume ịgbazite "supercar" maka ịnyagharị. McLaren, Lamborghini, Ferrari, Porshe. ma nke a ga-efu SGD 300,00 naanị maka 15 nkeji ...
N'ikpeazụ, onye nlekọta nke MBS, nke Nnukwu Ọdụ Osimiri Sky enwere ike ileta na enweghi nnabata, mana ugwo SGD 20,00. Ọ bụrụ na ịnọ na MBS, ịnweta bụ n'efu.
Ọ bụ nke abụọ kasị elu Ferris wheel na ụwa na 165 mita elu. Ọnụ ụzọ na-akwụ ụgwọ SGD 33,00. Ihe dị mma bụ na ị na-elekwa obodo ahụ anya.
Ihe na-adọrọ mmasị banyere ya bụ na ọ bụ nnukwu wiil nke na-anaghị akwụsị, ọ nwere oge 30 n'ime ụlọ. Nke a pụtara na ọ dị ngwa ngwa, ụjọ anaghị atụ gị ịbanye n'ime ụlọ ahụ. Oge a ezuola ka ị nwee mmasị na gburugburu ma hụ Singapore maka echiche pụrụ iche.
Ọ dị ka obere obodo Indian na Singapore, o nwere ihe ndị mara mma ma ịchọta ọtụtụ ụlọ ndị ọzọ n'ebe ahụ. O kwere omume ịnọ na ụlọ ndị a iji weghachite uru bara uru na Marina Bay Sands.
Na agbata obi a, ị nwere ụdị dịgasị iche iche, nke kachasị dị mfe n'ime ya bụ naanị akwa dị mfe ruo ihe kachasị nụ.
Ugbo site na Bay
Ọ bụ ụdị ogige teknụzụ dị nso n'ọnụ mmiri ahụ. Nsụgharị nkịtị ga-abụ: Ụlọ nke Bay. Ọ bụ ebe nke gburugburu ebe obibi na nchekwa umu, dị ka a ngwakọta nke botanical ubi na a anyanwụ ike osisi engineered na-abụ yiri nke okooko osisi. Echiche bụ igosi na ike na-aga, dị ka osisi ọkụ anyanwụ nwere ike inye obodo. Ntughari mpaghara bụ ihe niile nye onye ọ bụla ma na-ezo aka ike. Ya mere, ọ bụ ọrụ nchedo gburugburu ebe obibi nwere nnukwu ụlọ griin na ụwa (na 2014). Nri griin a di nma n'idi ahihia. Ubi ahụ nwere ọtụtụ ụdị osisi.
Ebe ọzọ ị ga-esi "gaa" bụ ọdụ ụgbọ. Ọ na-ejikọta nkwado, arụmọrụ na nkasi obi. Ha chere n'ezie banyere onye nlegharị anya. E nwere ebe ndị nwere loungers, nke a pụrụ iji dịka akwa, isi mmiri mmiri, ọkpụkpụ ụkwụ na ụkwụ. Na ihe a niile maka n'efu. Ị ka na-enyocha ma ọ bụrụ na ọrụ ọdụ ụgbọ elu dị mma.
O doro anya na ụlọ nkwari akụ ahụ dị na ndagwurugwu Changi dịkwuo ala karịa ụlọ nkịtị nke Marina Bay, na mgbakwunye na ịdị ọnụ ala karịa! Ọ na-eweta dịka nhọrọ ọkụ ọzọ na-arụ ọrụ dịka nkewa, a na-ese ya na iko ahụ ma na-eme ka ị hụ ụlọ ịsa ahụ ahụ, a ga-agbanyụkwa ya na iko ghere oghe dị ka nkewa. nke mejuputara imekota gburugburu ebe obibi. (ma ọ bụrụ na a na-egosi ịsa ahụ bat ma ọ bụ na-apụtaghị tub ahụ). Na mmiri ozuzo na ụdị 4 jet. Ọ naghị eche na MBS nwere, ọ bụghị ebe dị mma, ọ bụ obodo ahụ ma ị nwere ike ịnọ na ya ma jiri ụzọ ụgbọ oloko banye obodo ahụ. Ị ga-achọ oge karịa, mana ịnọghị ụgwọ ọ bụla. Phew, o nwedịrị ya.
Ọfọn, m na-anọ ebe a rue oge ọzọ. (I.e.
Maka ozi ndị ọzọ dị ka nke a, pịa map n'okpuru ebe a.
Olee otú ọdụ ụgbọ ókèghi ngwụcha Egwuregwu Osisi site n'ọnụ mmiri obere india marina bay sands ọdọ mmiri singapore flyer singapore